Gudoonka Baarlamaanka xal ugu raadinayo khilaafka madaxweyne Xasan iyo RW C/weli – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa doonaya in xal laga gaaro kala qeybsanaanta u dhaxeysa Baarlamaanka, iyadoo saacadihii u dambeeyay uu kulamo la lahaa Xildhibaanada Baarlamaanka, si xal looga gaaro mooshinka la wado.
Kulankii Baarlamaanka ee uu maanta yeelan lahaa ayaa dib ugu dhacay dadaalo uu doonayo in Gudoonka xal uga gaaro is qab qabsiga u dhaxeeya Xildhibaanada iyo mooshinka la keenay, si marka uu Baarlamaanka kulmo aanu fowdo iyo buuq uga dhex bilaaban.
Inkastoo aanu Gudoonka si cad u cadeyn in mooshin loo soo gudbiyay, hadana waxaa socda dadaalo uu arrintan ku baajinayo, si meesha looga saaro kala qeybsanaanta Xildhibaanada Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Labadiisa kuxigeen ayaa xalay la kulmay Xildhibaanada keenay mooshinka, inkastoo kulankaas uu ahaa mid albaabada u xirnaa, hadana waxaa uu wali Gudoonka isku dayayaa inuu meesha ka saaro kala aragti duwanaanshaha soo kala dhex galay Xildhibaanada.
Sidoo kale Gudoonka ayaa la kulmi doona maanta dhinaca kale ee ka soo horjeeda mooshinka, iyadoo inta kulamadan ay socdaan laga yaabo inay dib u dhacaan kulamadii caadiga ahaa ee Baarlamaanka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Gudoonka isku dayayo inuu baajiyo mooshinka laga keenay Ra’iisul Wasaaraha, hase ahaatee waxaa diidan Xildhibaanadii soo qoray, kuwaasoo uu shaki ka taagan yahay tiradooda saxda ah, kadib markii Xildhibaano saxiixooda ku arkay warqada ay beeniyeen inay ku lug leeyihiin mooshinka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in maalinta berri oo Axad ah uu go’aan gaari doono Gudoonka Baarlamaanka, marka ay soo dhamaadaan kulamada uu la leeyahay labada dhinac ee Xildhibaanada iyo sharciyaqaanada, waxaana dooda ugu weyn ay tahay sharci ahaanshaha Mooshinka oo la rabo in Gudoonka ay si wada jir ah u aqbalaan, uguna dhawaaqaan in mooshin la keenay, si loo horkeeno Baarlamaanka.
Si kastaba ha ahaatee kulamo gaar gaar ah ayaa ka soconayay tan iyo xalay Aqalada saddexda Mas’uul ee ugu sareeya, iyadoo murankan siyaasadeed ee soo kala dhex galay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha uu saameyn xoogan ku yeeshay Hey’adaha dowladda.
Jaziirada Kudhaa oo Alshabaab xoog kula wareegeen, kadib dagaal culus